गण्डकीका नेपाल पक्षीय एक्ला सांसद भन्छन् : सेटिङको कुरा आएको थियो, देखियो
सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादीको एकीकरण खारेज गरेसँगै माधवकुमार नेपालको समूहले के गर्छ भन्ने अन्योल छ । उनीनिकट प्रदेश सांसद पनि द्विविधामा छन् । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा ४० जना नेकपाका हुन् ।
४० मध्ये २७ जना तत्कालीन एमाले, १२ जना माओवादी, तीनजना राजमो र दुई जना जसपाका हुन् । तत्कालीन एमालेका २७ सांसदमध्ये एकजना सांसद बागलुङका इन्द्रलाल सापकोटा मात्रै नेपाल पक्षका छन् ।
सांसद सापकोटा ओली पक्षलाई हल्लाउने शक्ति आफूहरूसँग भएको दाबी गर्छन् । ‘दुई/चार जना भए केपी बा’ले कारबाही गर्लान् । देशभर केपी बा’लाई हल्लाउने तागत छ,’ शिलापत्रसँग उनले भने, ‘हिजो महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गरेर आएको हो, अहिले पनि देशैभर समानान्तर शक्तिको रूपमा छ ।’
नेपाल पक्षीय एक्ला सांसद सापकोटाको भनाइ जस्ताको तस्तैः
सर्वोच्चसँग जे माग भएको थियो त्योभन्दा विपरीत फैसला गर्‍यो । एकता गराइदिने, एकता टुटाइदिने काम सर्वोच्चको होइन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नाम जुध्यो, नाम जुधाएर राख्न पाइन्न भन्ने थियो । अदालतले नामको बारेमा फैसला गर्न पाउँथ्यो, गर्‍यो । तर तिमीहरू एक किन भयौ ? दुईतिरै लाग भन्ने अदालतको काम हो र ?
यसकारण अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर फैसला गर्नुले प्रश्न उठेको छ । त्यसको पुनरावलोकन होला । दोस्रो कुरा, अहिले न पूर्वएमाले हिजोको यथावत अवस्थामा छ, न पूर्वमाओवादी हिजोको अवस्थामा छ । केही सांसद के हुन्छन् भन्ने जटिलताका विषय हाम्रो बीचमा छन् । केही कानुनी जटिलताका विषय छन् ।
यो फैसलाले अब पार्टी एकतालाई मजबुत बनाएर जानुको विकल्प छैन । केपी ओलीको छत्रछायाँभित्र सर्लक्क भित्रिएर जाने ठाउँमा पूर्व एमाले छैन । दुई-चार जना भए केपी बा’ले कारबाही गर्लान् । देशभर केपी बा’लाई हल्लाउने तागत छ । हिजो महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गरेर आएको हो, अहिले पनि देशैभर समानान्तर शक्तिको रुपमा छ । एक-दुई जनालाई सांसद पद जाला भनेर लोभीपापीलाई त थर्काउलान्, देशैभर के अर्थ छ र त्यसको ?
सेटिङको कुरा आएको थियो, रहेछ, देखियो । निर्वाचन आयोगले ढिलाइ किन गर्‍यो भन्ने पनि घामझैँ छर्लंग छ । यो जालझेल, षड्यन्त्र गरेर, कूटनीति गरेर, किर्ते तमसुक बनाएर कति दिन चल्छ पार्टी ? पार्टी त विचार र भावनाले चल्ने हो । पूर्वएमाले सर्लक्कै केपी बा’ले भनेझैँ सबै फर्केर आओ भन्दैमा त्यहाँ जाने पनि देख्दिनँ । पूर्वमाओवादीभित्र पनि अवस्था त्यही छ । त्यसकारण आजको आवश्यकता के हो भने जहाँ टुटफुट, हिजो कुन कुरामा बेथिति भयो फेरि पनि पार्टी एकता गरेर, कम्युनिस्ट पार्टीलाई एक बनाएर जानुको अर्को विकल्प के छ र ?
म त पार्टी एकताको पक्षमा छु, अझ मजबुत भएर जानुपर्छ । एकछिन मानौँ, एमाले पार्टी बनाइयो । यो फुटेको एमाले गरीखाने ठाउँमा पुग्छ? हिजोको पोजिसन, हिजोको साख, हिजोको एजेन्डा केही बाँकी छ ? माओवादीसँग पनि केही एजेन्डा छ ? बादल, टोपबहादुर कहाँ हो जाने ? नारायणकाजी, वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा कसले जितायो ? नेकपाले होइन ? तिनका पद कहाँ जाने ?
यो त बोल्नै नपर्ने कुरामा अदालत बोल्यो । नामको बारेमा उसले माग दावा गरेको थियो, त्यसैको बारेमा बोल्नुपर्थ्यो । हस्तक्षेपको पनि हद हुन्छ नि अदालतको पनि ! कम्युनिस्ट पार्टी फुटाउन र जुटाउन बस्या हो सर्वोच्च अदालत ?
प्रकाशित मिति: सोमबार, फागुन २४, २०७७, २१:३३:३७